Home News Fahad Yasin: Ka mid noqoshada Baarlamaanka soo socda anaga ayaa go’aan ka...
Fahad Yasin: Ka mid noqoshada Baarlamaanka soo socda anaga ayaa go’aan ka gaarayno
Waxaa isa soo taraya qorshaha la doonayo in baarlamaanka Soomaliya si fudud loo kala diro. Hadii aanay kulamo tayo leh uusan baarlamaanka Soomaaliya qaban sanadkan inta ka hartay, sanadka 2019 waxaa xildhibaanada Soomaaliya lagu bilaabayaa cadaadis iyo cagajuglayn.
Sanadka danbe waxaa xildihibaanada lagu qasbi doonaa in ay u hogaansanaadaan rabitaanka Fahad Yasin iyo Xassan Kheyre, iyada oo loogu cagajuglayn doono in la maalgalin doono musharaxiin la tartanta xildhinaada. Waxaa muuqata in ayan jirin qorsho la doonayo in dalkaan lagu horumariyo laakiin la doonayo in dhib hor leh lagaliyo. Hadii qorshaha Fahad Yasin hirgalo waxaan shaki ku jirin in qaranimadii Soomaaliya god ku dhici doonto. Baarlamanka Soomaaliya waxa uu haystaa fursad uu dib ugu soo ceshado awoodoodii, waana in uu si dhaqso ah kulankiisii rasmiga ahaa u qabsadaa.
Previous articleTaliska Booliska Jowhar oo uhanjabay Ganacsato diiday Shilinka Soomaaliga
Next articleBaarlamaanka Soomaaliya oo xirnaandoono ilaa dayaqaada Sanadka
Faah-faahin: Dagaal culus oo ka dhacay gobolka Sh-hoose